प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०७७, बुधबार १५:१९
प्युठानको चुजाँठाटी प्रहरी चौकी निर्माणकालागि नि:शुल्क जग्गा उपलब्ध गराईएको छ । प्यूठान मल्लरानी गाँउपालिका बर्बोट स्थित चुजाँठाटी प्रहरी चौकीकालागि विभिन्न ब्यक्तिहरु सामुहिक रुपमा ५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका हुन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका अनुसार साविकको धरमपानी गाविस वडा नं. ९ हाल मल्लरानी गाँउपालिका ३ बर्बोट स्थित आफुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट ९ जनाले सामुहिक रुपमा कित्ताकाट गरी ५ रोपनी (२५४४ वर्ग मीटर क्षेत्रफल) जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराएका हुन ।
यसरी जग्गा उपलब्ध गराउनेहरुमा मल्लरानी गाँउपालिकाका अध्यक्ष अमरध्वज रानामगर, मल्लरानी गाँउपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष गिरीराज पौडेल, सोही ठाँउका प्रेम जि.सी., लेखनाथ पौडेल, कुल बहादुर पौडेल, गणेश सेन, गिरीराज जैशी, राजेन्द्र पौडेल र युवराज पौडेल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जनाएको छ ।
चुजाँठाटी प्रहरी चौकीको आफ्नो भवन बर्षौ अघि जिर्ण भएर भत्किएपछि गत १२ बर्षदेखी स्थानीयको एउटा घर भाडामा ल्याएर संचालन हुँदै आएको छ ।